उम्दा चलचित्रकर्मी रोहित | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / उम्दा चलचित्रकर्मी रोहित
उम्दा चलचित्रकर्मी रोहित
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार January 5, 2019	0 93 Views
गाजलु निर्माता रोहित अधिकारी आजभोलि निकै चर्चामा छन् । चियापसलदेखि मिडियाहरुमा उनकै चर्चा छ । कारण हो दीपकराज गिरी र छक्कापंजा टिमसंगको सहकार्यको घोषणा । यो टिमसंग मिलेर उनले नयाँ चलचित्र निर्माण गर्दैछन् । लगालग ब्लकबस्टर चलचित्र दिएर कीर्तिमान कायम गरेका दिपकराज र छक्कापंजा टिमसंग उनको सहकार्यको चर्चाले चलचित्र क्षेत्र तरंगित भएको छ ।
उहाँहरुसंग सहकार्य गर्न पाउनु मेरो लागि विशेष अवसर हो । म निकै खुशी र गौरवान्वित भएको छु । रोहितले उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया दिए । उहाँहरुका पछि धेरै मान्छेहरु लागेका थिए । तर मलाई विश्वास गर्नु भयो । मसंग सहकार्य गर्न तयार हुनु भयो । यो मेरो लागि गर्वको विषय हो ।
सामाजिक विषयवस्तुमा निर्माण गरिने सो चलचित्रको दीपकराज गिरीले स्क्रिप्ट लेखिरहेका छन् । घामपानी निर्देशक दीपेन्द्र लामाले चलचित्रको निर्देशन गर्नेछन् । चलचित्रमा दिपकराज गिरी नै मुख्य भूमिकामा देखिनेछन् । फागुनको अन्तिम साता या चैत्रको पहिलो सातादेखि चलचित्रको छायांकन शुरु हुनेछ भने आगामी दशैंमा रिलिज गरिनेछ ।
यो चलचित्रबाट रोहित निकै आशावादी र उत्साहित छन् । भन्छन्– चलचित्र स्तरीय बन्नेछ । नेपाली दर्शहरुको रुचि र मागलाई ध्यानमा राखेर चलचित्र निर्माण गरिनेछ । यो चलचित्रप्रति म निकै आशावादी छु । नेपाली चलचित्र उद्योगले एउटा सार्थक चलचित्र पाउनेछ ।
युवा स्टार अनमोल केसी र सन् २०१३ की मिस नेपाल सृष्टि श्रेष्ठ अभिनित गाजलु निर्माणसंगै चर्चामा आएका रोहित गाजलु सुपरहिट भएपछि उम्दा चलचित्रकर्मीको रुपमा उदाए । उनी सबैतिर चिनिए र प्रशंसित भए । गाजलुले थुप्रै अवार्डहरु जित्यो । युकेमा एकैपटक २० वटामा पर्दामा रिलिज हुने पहिलो फिल्म बन्यो गाजलु । नेपाली चलचित्रको घरेलु बजार त बढायो नै अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमा गाजलुले नयाँ आयाय दियो ।
गाजलु मेरो चलचित्र यात्राको कोसेढुंगा साबित भयो । गाजलुको सफलताले मेरो हौसला बुलन्द भयो र मलाई चलचित्र क्षेत्रमा अझ निष्ठापूर्वक समर्पित हुने उर्जा जाग्यो । रोहितले विगतको अनुभूति सुनाए ।
दाङको घोराही १६ कपासी निवासी निमबहादुर अधिकारी र यमकुमारीका दोस्रो सन्तानका रुपमा वि.सं. २०४६ आषाढ ४ मा जन्मिएका रोहित प्लस टु अध्ययनका लागि वि.सं. २०६४ मा काठमाडौं हानिए । व्यवस्थापन विषमा प्लस टु सकाएपछि उनी फिल्म निर्देशन सम्बन्धी स्नातक तहको अध्ययनका लागि उनी ओस्कार कलेजमा भर्ना भए । सानैदेखि चलचित्रप्रति गहिरो रुचि राख्ने रोहित अब भने निकै उत्साहित भए र भविष्यमा चलचित्र क्षेत्रमा स्थापित हुने संकल्पका साथ अध्ययनमा जुटे ।
अध्ययनकै क्रममा रोहितले के म तिम्रो बन्न सक्छु ? चलचित्रमा निर्देशक सबिर श्रेष्ठको सहायक भएर फिल्म निर्माण÷निर्देशनको अनुभव लिए । यो चलचित्रका नायक आर्यन सिग्देल थिए । त्यो बेला आर्यन निकै चल्तीमा थिए । वि.सं. २०७२ मा उनी हेमराज विसी निर्देशित चलचित्र सम्बोधनको कार्यकारी निर्माता बने । चलचित्र सम्बोधनमा दयाह्याङ राई र नम्रता श्रेष्ठ मुख्य भूमिकामा थिए । एकातिर चलचित्र सम्बन्धी औपचारिक अध्ययन र अर्कोतिर व्यावहारिक अनुभवले छोटो समयमा रोहित सफल भए ।
नेपाली चलचचित्रको वर्तमान अवस्था दयनीय भए पनि भविष्य भने उज्वल रहेको रोहितको ठम्याइ छ ।
अहिले स्थिति अलि संकटपूर्ण छ, दयनीय छ । बजार सानो छ । तर भविष्य भने निकै उज्वल छ । पछिल्लो समय सबै हिसाबले स्तरीय चलचित्रहरु निर्माण हुन थालेका छन् । दर्शकहरुमा पनि एककिसिमको उत्साह छ । रोहितले आफ्नो ठम्याइ यसरी व्यक्त गरे ।
अहिले निर्माताको रुपमा स्थापित भएका रोहित भविष्यमा निर्देशनतिर पनि लम्कने सोंचमा छन् । केही वर्षपछि उनले निर्देशनमा हात हाल्ने लक्ष बनाएका छन् । फरकधारका कलात्मक फिल्म विशेष रुचाउने उनी आफू भने व्यावसायिक धारका फिल्म निर्माण गर्ने बताउँछन् ।
पछिल्लो समय दिपकराज गिरी र छकापंजा टिमसंग निर्माण गर्ने चलचित्रले पुनः एकपटक रोहितलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रको एक उम्दा निर्माताको रुपमा प्रमाणित गर्नेछ र उनको योगदानले चलचित्र क्षेत्रमा श्रीवृद्धिमा एक इँटा थप्नेछ ।
Previous: स्रष्टाहरुले गलत कुराको आलोचना गर्ने नैतिक साहस गुमाउनुहुन्न
Next: स्थानीय तहलाई चार वर्गमा वर्गीकरण